Gooseneck Kicheni Faucet Chrome
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Gooseneck Kicheni Faucet Chrome
WOWOW Gooseneck Kicheni Faucet Chrome
Kana tapuro yekusanganisa yekubheka ikaburitsa sprayer pairi, tinya pfumo kuti uvhare sosi yemvura kekutanga.
Iyo furo furu inoita kuti mvura inyorove, iwedzere mvura-uye kubudirira.
2311701C yekuraira mirairo
Iyi yekusanganisa yemukicheni inobata 2311701C kudhira kunze sprayer kunoitwa nekukanda mhangura yakakosha uye kutungamira yekushambidza. SUS304 ndeyekudyidzana nharaunda uye hutano. Hutano hwedu hunobva kune vedu vanochengeta. Iyo inogona kugadziriswa nekupisa uye inotonhora kutenderera, iri nyore kutsiva, iri nyore kuisa, yakashongedzwa uye yakashongedzwa, uye yakakodzera kune akasiyana ekugezera uye yekushongedza yekicheni.
Dhonza sekuda kwako, yakanakisa yekugeza nekuwacha ndiro, mvura yekubatira yakawanda, mvura yekugezesa / faucet inogona kushandurwa pakuda, simbi shaft vharuvhu musimboti, yakasimba isingazungunuke uye yakasimba
Kugadzirwa kwechigadzirwa kunosanganisira: faucet, hose, huremo, huremu, zvigadzirwa zvekuisa
SKU: 2311701C Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: 1 Horo, Chrome, sprayer
60 x 30 x 7.5 cm; 2.94 makirogiramu